“ဒါဖွငျ့၊ မငျးနှုတျခမျးက ဘာလို့ကှဲနတောလဲ။ခြျောလဲတာတော့ မဖွဈနိုငျဘူး။တဈခုခုနဲ့ဆောငျ့မိတာလညျး မဖွဈနိုငျဘူး။တဈယောကျယောကျက လကျသီးနဲ့ထိုးလိုကျတာပဲ ဖွဈရမယျ။ဟကေ့ောငျ - ငါ့ကိုမညာနဲ့နျော။ငါ့အကွောငျးသိတယျ မဟုတျလား”
“ဘယျနှဈခကျြဖွဈဖွဈပေါ့ကှ။သူမြားကထိုးတာကို မငျးက ဒီအတိုငျးငုံ့ခံလာရလား”
“ဘာဖွဈဖွဈပေါ့ကှ။ပါးစပျနဲ့ပွောရငျရသားနဲ့၊ သူက ဘာလို့လကျပါရတာလဲ”
“မရဘူး။လာ - လိုကျခဲ့။အဲဒီကောငျကိုပွနျထိုး။ငါရှိတယျ၊ ဘယျသူ့ကိုမှကွောကျစရာမလိုဘူး”
“သားက၊ ကွောကျလို့ခံခဲ့တာမှ မဟုတျတာ။သူက သားသူငယျခငျြးပါ။သူ့အရုပျလေးက အသဈလေး။သားကွောငျ့ပကျြသှားလို့ အမှတျတမဲ့ စိတျဆိုးပွီး ထိုးလိုကျတာပါ။သူက ခါတိုငျးဒီလိုမဟုတျပါဘူး”
“သူစိတျဆိုးတိုငျး ထိုးရမှာလားကှ။ဘယျသူလုပျတာမှ မခံခဲ့ရဘူးလို့ မငျးကိုမှာထားတယျမဟုတျလား။လာခဲ့။အဲဒီကောငျဆီသှားမယျ”
လမျးထိပျက လကျဖကျရညျဆိုငျမှာ လကျဖကျရညျထိုငျသောကျနစေဉျ ဖွဈပါသညျ။သားအဖနှဈယောကျ ပွောနကွေခွငျးပါ။သားက ကြောငျးကားပျေါမှဆငျးလာပွီး လကျဖကျရညျဆိုငျမှာ လာကွိုနသေော အဖဖွေဈသူဆီ ပွေးလာစဉျ အဖကေ သူ့သား နှုတျခမျးပေါကျထားသညျကိုမွငျ၍ မကမြေနပျနှငျ့ ပွောနခွေငျးဖွဈ၏။နောကျဆုံးတော့ ဒေါသကွီးနသေော အဖဖွေဈသူ၏ ဆှဲချေါရာသို့ မလိုကျခငျြဘဲ လိုကျသှားရရှာသညျ့ သားဖွဈသူကိုကွညျ့ပွီး စိတျမကောငျးဖွဈမိပါသညျ။
ဆတျဆတျထိမခံသော အဖကေ သားဖွဈသူ ရှငျးပွနသေညျ့စကားမြား သူ့နားထဲ မရောကျတာလား၊ နားထဲရောကျသျောလညျး သဘောမပေါကျတာလားမသိ။သခြောတာကတော့ သားအတှကျ အရှညျကိုမတှေးခဲ့ခွငျးပငျဖွဈ၏။တကယျဆိုလြှငျ သားဖွဈသူက ရနျလိုသညျ့တိုငျ အဖကေ တားဆီးရမညျ၊ နှဈသိမျ့ရမညျဖွဈ၏။
အဖွဈမှနျကို စုံစမျး၍ မိဘခငျြးဖွဈစေ၊ ဆရာ၊ ဆရာမမြားနှငျ့ဖွဈစေ ဆှေးနှေးညှိနှိုငျးသငျ့ပသေညျ။
ယခုဖွဈရပျမှာ သားဖွဈသူက သူမှားကွောငျး ဝနျခံထားသညျ။အကယျ၍ သားက ကွောကျလနျ့ပွီး စကားနညျးရနျစဲ ပွောလာသညျဟု သံသယရှိလြှငျလညျး အေးအေးဆေးဆေး အိမျပွနျချေါသှားပွီး နောကျတဈရကျမှ ကြောငျးကိုလိုကျသှား၍ ဆရာ၊ ဆရာမမြားထံ စုံစမျးမေးမွနျးသငျ့ပသေညျ။ကွီးသညျ့အမှုကို သေးအောငျ၊ သေးသညျ့အမှုကို ပပြောကျအောငျ မကွိုးစားဘဲ ပွဿနာမဖွဈဖွဈအောငျ မကွီးကွီးအောငျ ဖနျတီးနေ၏။
အခြို့လူကွီးမြားသညျ အရှညျကို မတှေးတတျကွပေ။အကောငျးနှငျ့အဆိုး၊ အကြိုးနှငျ့အပွဈကို ဝဖေနျဆနျးစဈခွငျးမရှိဘဲ သှေးပူပူနှငျ့ အလှယျတကူ ဆုံးဖွတျတတျကွ၏။သူတို့ကိုယျတိုငျ ကောငျးတာလုပျနသေညျလား၊ မကောငျးတာလုပျနသေညျလားဆိုတာကို မဝဖေနျနိုငျကွပေ။ထိုသို့ မဝဖေနျနိုငျသောကွောငျ့လညျး သားသမီးအပျေါထားရှိသညျ့ သူတို့စတေနာ၏ အမှနျအမှားကို သသေခြောခြာ မခှဲခွားနိုငျခွငျးဖွဈ၏။
မိဘက သားသမီးကို ခဈြသညျမှာ အထူးအဆနျးမဟုတျပါ။အသိဉာဏျမရှိဟု သတျမှတျထားသော တိရစ်ဆာနျမြားသညျပငျ သူတို့၏ သားသမီးကို ခဈြကွပါသညျ။သို့သျော ခဈြတာတဈခုတညျးနှငျ့တော့ ပွီးပွညျ့စုံခွငျး မရှိနိုငျပါ။ခဈြခွငျး၏ရှမှေ့ာ အကောငျးနှငျ့အဆိုး၊ အမှနျနှငျ့အမှားကို ခှဲခွားနိုငျသညျ့ အသိပညာရှိမှ ဖွဈပမေညျ။သို့မှသာ ခဈြခွငျး၏ရလဒျက မှနျကနျကောငျးမှနျပလေိမျ့မညျ။
မိဘမြားသညျ ကိုယျတိုငျက ခတျေပညာမတတျသျောလညျး သားသမီးကို ခတျေပညာတတျမြား ဖွဈစခေငျြကွသညျ။ကိုယျတိုငျက အရကျ၊ လောငျးကစား၊ အပြျောအပါးလိုကျစားခွငျးကို ကြူးလှနျနသေျောလညျး သားသမီးကိုတော့ အရကျမသောကျရနျ၊ လောငျးကစားမပွုရနျ၊ အပြျောအပါးမလိုကျစားရနျ ခြော့၍တဈမြိုး၊ ခွောကျ၍တဈမြိုး တားဆီးထိနျးသိမျးကွသညျ။ကိုယျတိုငျက ဝါသနာစရိုကျအရဖွဈစေ၊ စီးပှားရေးအရဖွဈစေ၊ အပေါငျးအသငျး အဖှဲ့အစညျးကွောငျ့ဖွဈစေ မကောငျးမှုနယျပယျမှ ရုနျးမထှကျနိုငျသျောလညျး သားသမီးကိုတော့ ထိုမကောငျးမှုနယျပယျသို့ အရောကျမခံကွပေ။သားသမီးတှေ လမျးကွောငျးလှဲသှားမှာ၊ အမှားကြူးလှနျမိမှာကို စိုးရိမျတတျကွသညျ။
အထူးသတိထားကွသညျ။ကိုယျမှားသလို သားသမီးမြား လိုကျမှားမှာကို ပူပနျကွသညျ။ကိုယျမလုပျခဲ့ဖူးသညျ့ ကုသိုလျကောငျးမှုမြားကို သားသမီးမြား လုပျစခေငျြကွသညျ။
ယခုခတျေကာလတှငျ ဗုဒ်ဓသာသနာကလညျး ပှငျ့လငျးနရော မွနျမာပွညျအနှံ့အပွားမှာ ဝိပဿနာတရားစခနျးတှေ အတျောမြားမြားရှိနပေါသညျ။မိဘအမြားစုက စီးပှားရေးကိစ်စ၊ အိမျထောငျထိနျးသိမျးမှုကိစ်စမြားကွောငျ့ အခြိနျမရ၍ဖွဈစေ၊ နအေိမျကိုခှဲခှာပွီး တရားစခနျးမှာ တဈပတျ၊ ဆယျရကျ သှားမနနေိုငျ၍ဖွဈစေ၊ တရားထိုငျရမှာ ဝနျလေး၍ဖွဈစေ ကိုယျတိုငျမသှားဖွဈသညျ့တိုငျ သားသမီးမြားကို တရားစခနျးဝငျရနျ တိုကျတှနျးကွသညျ။လိုအပျသညျ့ပံ့ပိုးမှုမြား ပွုလုပျပေး၍ တရားစခနျး ဝငျစသေညျ။ကိုယျတိုငျက ကောငျးတာမလုပျနိုငျသေးသျောလညျး သားသမီးမြား အကငျြ့စာရိတ်တကောငျးမှနျစရေနျ၊ အခွားအပြျောအပါးမြား လုပျခှငျ့မရှိစရေနျ၊ ဘာသာရေး အကငျြ့ကောငျးမြား ရလာစရေနျ စသညျဖွငျ့ သားသမီး၏ အကြိုးကြေးဇူးအတှကျ ရညျရှယျစတေနာထားကွသညျ။မိဘတခြို့ကတော့ သားသမီးနှငျ့ အရကျအတူသောကျသညျ။လောငျးကစားအတူလုပျသညျ။အတူမသောကျ၊အတူမကစားသညျ့တိုငျ ကိုယျလညျး သောကျခငျြသညျ့နရောမှာ သောကျသညျ။ကစားခငျြသညျ့နရောမှာ ကစားသညျ။သားသမီးမြား သောကျခွငျး၊ ကစားခွငျးကိုလညျး မတားဆီးဘဲ ပံ့ပိုးအားပေးကွသညျ။
“ဘယျသူ့မှ ဂရုစိုကျစရာမလိုဘူး။ဖွဈလာသမြှ ကိစ်စအ၀၀ကို အဖတေို့ အမတေို့ လိုကျရှငျးမယျ” ဟု သားသမီးမြားကို မွှောကျစားထားကွသညျ။အလိုလိုကျထားကွးသညျ။
ငယျစဉျက သိပျမသိသာသျောလညျး တဖွညျးဖွညျးနှငျ့ အရှယျရောကျလာသောအခါ ငယျကငျြ့က စှဲမွဲလာသညျ။လှငျ့ပဈရမညျ့ စရိုကျဆိုးကို မွတျမွတျနိုးနိုး ခဈြသှားကွလပွေီ။မကောငျးမှုကို မတားမွဈသညျ့အပွငျ အားပေးအားမွှောကျပွုကွသော မိဘမြားကွောငျ့ သားသမီးမြား၏ စိတျအလှတှေ ပကျြစီးရသညျ။ဘဝအလှတှေ ပကျြစီးရသညျ။
‘သားသမီးကို ငယျကမဆုံးမက မိဘတလညျ ရနျသူမညျ၏’ ဟု ရှေးလူကွီးမြား ဆုံးမထားပါသညျ။အားလုံးကွားဖူးနသေညျ့ ပုံပွငျလေးတဈပုဒျကို မှတျမှတျရရ ရေးပွခငျြပါသညျ။အမနေ့ားရှကျ ကိုကျဖွတျသညျ့ ပုံပွငျလေးဖွဈပါသညျ။
တဈနတေ့ဈရကျမက၊ တဈလနှဈလ၊ တဈနှဈ နှဈနှဈမက အခြိနျတှကွောလာတော့ သူတဈပါး၏ပစ်စညျးကို ခိုးယူတတျသညျ့ သား၏အကငျြ့က ခိုငျမာလာသညျ။ကွီးထှားလာသညျ။ကြောငျးစာမှာ အာရုံမရှိတော့ဘဲ ခိုးဖို့ဝှကျဖို့ပဲ အာရုံဝငျစားနတေော့၏။မခိုးရလြှငျ မနနေိုငျတော့ပေ။အမကေလညျး မခိုးမဝှကျရနျ ဆိုဆုံးမခွငျးမပွုသညျ့အပွငျ ခိုးရာပါပစ်စညျးမြားကို ဝမျးသာအားရ လကျခံလိုကျသေး၏။
အရှယျရောကျလာသောအခါ သူခိုးသေးသေးလေး မဟုတျတော့ဘဲ သူခိုးအကွီးစားဖွဈလာသညျ။ခဲတံ၊ ပတေံလို ပစ်စညျးအသေးလေးတှကေို မခိုးတော့။ရှထေုပျ ငှထေုပျတှေ ခိုးလာသညျ။ဆငျးရဲသားငှထေုပျလညျး ပါသညျ။သူဌေးငှထေုပျလညျး ပါသညျ။ဝနျကွီး၊ စဈသူကွီး၊ မငျးသား၊ မငျးသမီး၊ ဘုရငျ၊ မိဖုရားတို့၏ ငှထေုပျ၊ ရှထေုပျ၊ ကြောကျသံပတ်တမွားထုပျတှေ ပါလာသညျ။တိုငျးပွညျ၏ အတှငျးသူခိုးကွီး ဖွဈလာသညျ။
‘လကျဦးဆရာ မညျထိုကျစှာ ပုဗ်ဗာစရိယ မိနှငျ့ဘ’ ဆိုသညျ့အတိုငျး သားသမီးမြား၏ ပထမဆုံးဆရာသညျ မိခငျနှငျ့ ဖခငျတို့ ဖွဈလသေညျ။‘ခြိုမိုငျမိုငျ’ မှ အစပွု၍ အပွောအဆို၊ အမူအရာ၊ လှုပျရှားမှုမြားကို အဖနှေငျ့ အမကေ သငျပေးခဲ့သညျ။တမငျတကာ မသငျသျောလညျး မိဘမြား၏ နစေ့ဉျလှုပျရှား ပွောဆိုသမြှသညျ သားသမီးကို သငျပွနတောနှငျ့ အတူတူပငျဖွဈလသေညျ။သားသမီး ပွောသမြှ လုပျသမြှကို မပွုပွငျဘဲ ကွညျ့နခွေငျး၊ ခှငျ့ပွုထားခွငျး၊ လဈြလြူရှုထားခွငျးသညျလညျး ထိုသို့ပွောဆိုပွုမူရနျ သငျပေးနခွေငျးဖွဈ၏။
အခြို့မိဘမြားသညျ ငှကွေေးပစ်စညျးဥစ်စာ ကွီးပှားရေးကို နံပါတျတဈ ဦးစားပေးကွသညျ။ရလလေိုလဖွေဈကာ လောဘကို အတောမသတျနိုငျကွပေ။လကျအောကျငယျသား အလုပျသမားမြားကိုလညျး ကိုယျ့အပျေါ မှီခိုနရေသူတှဟေု မထောကျမညှာဘဲ အတ်တကို ရှတေ့နျးတငျကွသညျ။မောကျမောကျမာမာ ဆကျဆံကွသညျ။မညှာမတာ ခိုငျးစကွေသညျ။
အခြိနျကိုလညျး ခေါငျးပုံဖွတျ၏။လုပျအားကိုလညျး ခေါငျးပုံဖွတျ၏။လုပျအားခကတြော့ မဖွဈစလောကျပေးပွီး မဟာကြေးဇူးရှငျကွီးအဖွဈ ခံယူကာ ပီတိဖွဈနကွေ၏။သားသမီး၊ တပညျ့မြားကိုပငျ လကျမထောငျကာ “ငါ့လိုဖွဈခငျြ ငါ့လိုကွိုးစား” ဟု မာနျတကျလကျြ သူတို့လိုတှေး၊ သူတို့လိုကငျြ့၊ သူတို့လို ပွုလုပျစသေညျ။
အခြို့က လကျနကျအားကိုး၊ အသိုငျးအဝိုငျးအားကိုးနှငျ့ သူတို့ထကျ အငျအားနညျးသောသူမြားအပျေါ အနိုငျကငျြ့ကွ၏။လုယကျ၏။သတျဖွတျ၏။စီးပှားပကျြစေ၏။ကိုယျလကျအင်ျဂါ ခြို့တဲ့စေ၏။မိသားစုသိုကျမွုံတှေ ပွိုကှဲပကျြစီးစေ၏။သူတို့လုပျရပျမြား မှနျသညျ၊ မှားသညျ မဆငျခွငျဘဲ သူတို့လုပျခငျြသမြှ ဖွဈနတောကို အမှနျတရားဟု ထငျနကွေ၏။သူတို့အမှနျဟု ထငျနသေော ထိုအမှားမြားကို သားသမီးမြားအား ဆိုးမှပေေးနကွေ၏။
အခြို့သော အာဏာရှငျမြားကတြော့ ပိုငျဆိုငျထားသော ရာထူးအာဏာအပျေါ ယဈမူးသာယာနကွေ၏။အာဏာလကျဝယျရှိသဖွငျ့ ငှဆေိုတာလညျး အလိုလိုရနကွေ၏။ထို့ကွောငျ့လညျး ထိုငျနသေညျ့ ပုလ်လငျပျေါက ဆငျးရမှာကို အဝီစိငရဲသို့ သှားရမညျထကျ ပို၍ကွောကျကွ၏။တှသေ့မြှလူမြားကို လူကောငျး လူဆိုး၊ မိတျဆှေ ရနျသူ မခှဲခွားနိုငျတော့ဘဲ ပုလ်လငျကို လုယူမညျ့သူမြား၊ ပုလ်လငျပျေါမှ ဆှဲခမြညျ့သူမြားဟု တဈထဈခယြူဆကာ ရိပျခနဲမွငျတာနှငျ့ ဖမျးဆီးပွီးသား၊ ခြုပျနှောငျပွီးသား၊ အပွဈပေးပွီးသား ဖွဈနေ၏။သားသမီးမြားကို ပှဲထုတျ၍ သူတို့နှငျ့အတူ အရိုအသခေံစလေကျြ စငျမွငျ့မှာတငျကွ၏။သူတို့၏ အမှဆေိုးမြားကို သားသမီးတို့အား တိုကျရိုကျပေးနကွေ၏။
ထို ငှကွေေးမာနျ၊ လကျနကျမာနျ၊ အာဏာမာနျ တကျသူမြားအနနှေငျ့ သားသမီးတပညျ့မြားက မိမိတို့၏ အပွောအဆို၊ အမူအရာ၊ အတှေးအချေါ အကငျြ့ဆိုး၊ စရိုကျဆိုးမြားကို တှရှေိ့ပွီး မိမိတို့၏ ခွရောအတိုငျး ဆကျလြှောကျ၍ မိမိတို့လို လူဆိုးတှဖွေဈလာမညျလား။မိမိတို့၏ အမှားမြားကိုမွငျ၍ အရှကျရကာ မကျြနှာငယျနကွေမညျလား၊ မိမိတို့ကို အထငျသေးသှားကွမညျလား၊ စိတျမထိနျးနိုငျဘဲ မိမိတို့၏ နားရှကျကို ကိုကျဖွတျခငျြနမေညျလားဟု မစဉျးစားမိကွပေ။
အမြားအကြိုးအတှကျ အသကျစှနျ့ခဲ့သော မိကောငျးဖကောငျးမြား၏ သားသမီးမြားသညျ မိဘ၏ ‘အေးရိပျ’ ကွောငျ့ လောကအလယျမှာ ထညျထညျဝါဝါနှငျ့ ခေါငျးမော့၍နရေပုံ၊ အမြားကိုဒုက်ခပေးသော မိဆိုးဖဆိုးမြား၏ သားသမီးမြားသညျ မိဘ၏ ‘အပူရိပျ’ ကွောငျ့ လောကအလယျမှာ ညှိုးညှိုးငယျငယျနှငျ့ ခေါငျးငုံ့၍နရေပုံတို့ကို ပတျဝနျးကငျြတှငျ အထငျအရှား မွငျတှနေို့ငျပါသညျ။
ဤသညျကို သတိမထား၊ မသိဆိုးဝါးကာ မိမိတို့၏ အတ်တအတှကျ သကျသကျယဈမူး သာယာနကွေဦးမညျဆိုလြှငျတော့ Please cover your ears. ကြေးဇူးပွု၍ နားရှကျလေးတှေ ဖုံးထားကွပါဟု။
နိုဝငျဘာ - ၂
“ဒါဖြင့်၊ မင်းနှုတ်ခမ်းက ဘာလို့ကွဲနေတာလဲ။ချော်လဲတာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။တစ်ခုခုနဲ့ဆောင့်မိတာလည်း မဖြစ်နိုင်ဘူး။တစ်ယောက်ယောက်က လက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်တာပဲ ဖြစ်ရမယ်။ဟေ့ကောင် - ငါ့ကိုမညာနဲ့နော်။ငါ့အကြောင်းသိတယ် မဟုတ်လား”
“ဘယ်နှစ်ချက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွ။သူများကထိုးတာကို မင်းက ဒီအတိုင်းငုံ့ခံလာရလား”
“ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွ။ပါးစပ်နဲ့ပြောရင်ရသားနဲ့၊ သူက ဘာလို့လက်ပါရတာလဲ”
“မရဘူး။လာ - လိုက်ခဲ့။အဲဒီကောင်ကိုပြန်ထိုး။ငါရှိတယ်၊ ဘယ်သူ့ကိုမှကြောက်စရာမလိုဘူး”
“သားက၊ ကြောက်လို့ခံခဲ့တာမှ မဟုတ်တာ။သူက သားသူငယ်ချင်းပါ။သူ့အရုပ်လေးက အသစ်လေး။သားကြောင့်ပျက်သွားလို့ အမှတ်တမဲ့ စိတ်ဆိုးပြီး ထိုးလိုက်တာပါ။သူက ခါတိုင်းဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး”
“သူစိတ်ဆိုးတိုင်း ထိုးရမှာလားကွ။ဘယ်သူလုပ်တာမှ မခံခဲ့ရဘူးလို့ မင်းကိုမှာထားတယ်မဟုတ်လား။လာခဲ့။အဲဒီကောင်ဆီသွားမယ်”
လမ်းထိပ်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ လက်ဖက်ရည်ထိုင်သောက်နေစဉ် ဖြစ်ပါသည်။သားအဖနှစ်ယောက် ပြောနေကြခြင်းပါ။သားက ကျောင်းကားပေါ်မှဆင်းလာပြီး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ လာကြိုနေသော အဖေဖြစ်သူဆီ ပြေးလာစဉ် အဖေက သူ့သား နှုတ်ခမ်းပေါက်ထားသည်ကိုမြင်၍ မကျေမနပ်နှင့် ပြောနေခြင်းဖြစ်၏။နောက်ဆုံးတော့ ဒေါသကြီးနေသော အဖေဖြစ်သူ၏ ဆွဲခေါ်ရာသို့ မလိုက်ချင်ဘဲ လိုက်သွားရရှာသည့် သားဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါသည်။
ဆတ်ဆတ်ထိမခံသော အဖေက သားဖြစ်သူ ရှင်းပြနေသည့်စကားများ သူ့နားထဲ မရောက်တာလား၊ နားထဲရောက်သော်လည်း သဘောမပေါက်တာလားမသိ။သေချာတာကတော့ သားအတွက် အရှည်ကိုမတွေးခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်၏။တကယ်ဆိုလျှင် သားဖြစ်သူက ရန်လိုသည့်တိုင် အဖေက တားဆီးရမည်၊ နှစ်သိမ့်ရမည်ဖြစ်၏။
အဖြစ်မှန်ကို စုံစမ်း၍ မိဘချင်းဖြစ်စေ၊ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့်ဖြစ်စေ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသင့်ပေသည်။
ယခုဖြစ်ရပ်မှာ သားဖြစ်သူက သူမှားကြောင်း ဝန်ခံထားသည်။အကယ်၍ သားက ကြောက်လန့်ပြီး စကားနည်းရန်စဲ ပြောလာသည်ဟု သံသယရှိလျှင်လည်း အေးအေးဆေးဆေး အိမ်ပြန်ခေါ်သွားပြီး နောက်တစ်ရက်မှ ကျောင်းကိုလိုက်သွား၍ ဆရာ၊ ဆရာမများထံ စုံစမ်းမေးမြန်းသင့်ပေသည်။ကြီးသည့်အမှုကို သေးအောင်၊ သေးသည့်အမှုကို ပပျောက်အောင် မကြိုးစားဘဲ ပြဿနာမဖြစ်ဖြစ်အောင် မကြီးကြီးအောင် ဖန်တီးနေ၏။
အချို့လူကြီးများသည် အရှည်ကို မတွေးတတ်ကြပေ။အကောင်းနှင့်အဆိုး၊ အကျိုးနှင့်အပြစ်ကို ဝေဖန်ဆန်းစစ်ခြင်းမရှိဘဲ သွေးပူပူနှင့် အလွယ်တကူ ဆုံးဖြတ်တတ်ကြ၏။သူတို့ကိုယ်တိုင် ကောင်းတာလုပ်နေသည်လား၊ မကောင်းတာလုပ်နေသည်လားဆိုတာကို မဝေဖန်နိုင်ကြပေ။ထိုသို့ မဝေဖန်နိုင်သောကြောင့်လည်း သားသမီးအပေါ်ထားရှိသည့် သူတို့စေတနာ၏ အမှန်အမှားကို သေသေချာချာ မခွဲခြားနိုင်ခြင်းဖြစ်၏။
မိဘက သားသမီးကို ချစ်သည်မှာ အထူးအဆန်းမဟုတ်ပါ။အသိဉာဏ်မရှိဟု သတ်မှတ်ထားသော တိရစ္ဆာန်များသည်ပင် သူတို့၏ သားသမီးကို ချစ်ကြပါသည်။သို့သော် ချစ်တာတစ်ခုတည်းနှင့်တော့ ပြီးပြည့်စုံခြင်း မရှိနိုင်ပါ။ချစ်ခြင်း၏ရှေ့မှာ အကောင်းနှင့်အဆိုး၊ အမှန်နှင့်အမှားကို ခွဲခြားနိုင်သည့် အသိပညာရှိမှ ဖြစ်ပေမည်။သို့မှသာ ချစ်ခြင်း၏ရလဒ်က မှန်ကန်ကောင်းမွန်ပေလိမ့်မည်။
မိဘများသည် ကိုယ်တိုင်က ခေတ်ပညာမတတ်သော်လည်း သားသမီးကို ခေတ်ပညာတတ်များ ဖြစ်စေချင်ကြသည်။ကိုယ်တိုင်က အရက်၊ လောင်းကစား၊ အပျော်အပါးလိုက်စားခြင်းကို ကျူးလွန်နေသော်လည်း သားသမီးကိုတော့ အရက်မသောက်ရန်၊ လောင်းကစားမပြုရန်၊ အပျော်အပါးမလိုက်စားရန် ချော့၍တစ်မျိုး၊ ခြောက်၍တစ်မျိုး တားဆီးထိန်းသိမ်းကြသည်။ကိုယ်တိုင်က ဝါသနာစရိုက်အရဖြစ်စေ၊ စီးပွားရေးအရဖြစ်စေ၊ အပေါင်းအသင်း အဖွဲ့အစည်းကြောင့်ဖြစ်စေ မကောင်းမှုနယ်ပယ်မှ ရုန်းမထွက်နိုင်သော်လည်း သားသမီးကိုတော့ ထိုမကောင်းမှုနယ်ပယ်သို့ အရောက်မခံကြပေ။သားသမီးတွေ လမ်းကြောင်းလွဲသွားမှာ၊ အမှားကျူးလွန်မိမှာကို စိုးရိမ်တတ်ကြသည်။
အထူးသတိထားကြသည်။ကိုယ်မှားသလို သားသမီးများ လိုက်မှားမှာကို ပူပန်ကြသည်။ကိုယ်မလုပ်ခဲ့ဖူးသည့် ကုသိုလ်ကောင်းမှုများကို သားသမီးများ လုပ်စေချင်ကြသည်။
ယခုခေတ်ကာလတွင် ဗုဒ္ဓသာသနာကလည်း ပွင့်လင်းနေရာ မြန်မာပြည်အနှံ့အပြားမှာ ဝိပဿနာတရားစခန်းတွေ အတော်များများရှိနေပါသည်။မိဘအများစုက စီးပွားရေးကိစ္စ၊ အိမ်ထောင်ထိန်းသိမ်းမှုကိစ္စများကြောင့် အချိန်မရ၍ဖြစ်စေ၊ နေအိမ်ကိုခွဲခွာပြီး တရားစခန်းမှာ တစ်ပတ်၊ ဆယ်ရက် သွားမနေနိုင်၍ဖြစ်စေ၊ တရားထိုင်ရမှာ ဝန်လေး၍ဖြစ်စေ ကိုယ်တိုင်မသွားဖြစ်သည့်တိုင် သားသမီးများကို တရားစခန်းဝင်ရန် တိုက်တွန်းကြသည်။လိုအပ်သည့်ပံ့ပိုးမှုများ ပြုလုပ်ပေး၍ တရားစခန်း ဝင်စေသည်။ကိုယ်တိုင်က ကောင်းတာမလုပ်နိုင်သေးသော်လည်း သားသမီးများ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်စေရန်၊ အခြားအပျော်အပါးများ လုပ်ခွင့်မရှိစေရန်၊ ဘာသာရေး အကျင့်ကောင်းများ ရလာစေရန် စသည်ဖြင့် သားသမီး၏ အကျိုးကျေးဇူးအတွက် ရည်ရွယ်စေတနာထားကြသည်။မိဘတချို့ကတော့ သားသမီးနှင့် အရက်အတူသောက်သည်။လောင်းကစားအတူလုပ်သည်။အတူမသောက်၊အတူမကစားသည့်တိုင် ကိုယ်လည်း သောက်ချင်သည့်နေရာမှာ သောက်သည်။ကစားချင်သည့်နေရာမှာ ကစားသည်။သားသမီးများ သောက်ခြင်း၊ ကစားခြင်းကိုလည်း မတားဆီးဘဲ ပံ့ပိုးအားပေးကြသည်။
“ဘယ်သူ့မှ ဂရုစိုက်စရာမလိုဘူး။ဖြစ်လာသမျှ ကိစ္စအ၀၀ကို အဖေတို့ အမေတို့ လိုက်ရှင်းမယ်” ဟု သားသမီးများကို မြှောက်စားထားကြသည်။အလိုလိုက်ထားကြးသည်။
ငယ်စဉ်က သိပ်မသိသာသော်လည်း တဖြည်းဖြည်းနှင့် အရွယ်ရောက်လာသောအခါ ငယ်ကျင့်က စွဲမြဲလာသည်။လွှင့်ပစ်ရမည့် စရိုက်ဆိုးကို မြတ်မြတ်နိုးနိုး ချစ်သွားကြလေပြီ။မကောင်းမှုကို မတားမြစ်သည့်အပြင် အားပေးအားမြှောက်ပြုကြသော မိဘများကြောင့် သားသမီးများ၏ စိတ်အလှတွေ ပျက်စီးရသည်။ဘဝအလှတွေ ပျက်စီးရသည်။
‘သားသမီးကို ငယ်ကမဆုံးမက မိဘတလည် ရန်သူမည်၏’ ဟု ရှေးလူကြီးများ ဆုံးမထားပါသည်။အားလုံးကြားဖူးနေသည့် ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ကို မှတ်မှတ်ရရ ရေးပြချင်ပါသည်။အမေ့နားရွက် ကိုက်ဖြတ်သည့် ပုံပြင်လေးဖြစ်ပါသည်။
တစ်နေ့တစ်ရက်မက၊ တစ်လနှစ်လ၊ တစ်နှစ် နှစ်နှစ်မက အချိန်တွေကြာလာတော့ သူတစ်ပါး၏ပစ္စည်းကို ခိုးယူတတ်သည့် သား၏အကျင့်က ခိုင်မာလာသည်။ကြီးထွားလာသည်။ကျောင်းစာမှာ အာရုံမရှိတော့ဘဲ ခိုးဖို့ဝှက်ဖို့ပဲ အာရုံဝင်စားနေတော့၏။မခိုးရလျှင် မနေနိုင်တော့ပေ။အမေကလည်း မခိုးမဝှက်ရန် ဆိုဆုံးမခြင်းမပြုသည့်အပြင် ခိုးရာပါပစ္စည်းများကို ဝမ်းသာအားရ လက်ခံလိုက်သေး၏။
အရွယ်ရောက်လာသောအခါ သူခိုးသေးသေးလေး မဟုတ်တော့ဘဲ သူခိုးအကြီးစားဖြစ်လာသည်။ခဲတံ၊ ပေတံလို ပစ္စည်းအသေးလေးတွေကို မခိုးတော့။ရွှေထုပ် ငွေထုပ်တွေ ခိုးလာသည်။ဆင်းရဲသားငွေထုပ်လည်း ပါသည်။သူဌေးငွေထုပ်လည်း ပါသည်။ဝန်ကြီး၊ စစ်သူကြီး၊ မင်းသား၊ မင်းသမီး၊ ဘုရင်၊ မိဖုရားတို့၏ ငွေထုပ်၊ ရွှေထုပ်၊ ကျောက်သံပတ္တမြားထုပ်တွေ ပါလာသည်။တိုင်းပြည်၏ အတွင်းသူခိုးကြီး ဖြစ်လာသည်။
‘လက်ဦးဆရာ မည်ထိုက်စွာ ပုဗ္ဗာစရိယ မိနှင့်ဘ’ ဆိုသည့်အတိုင်း သားသမီးများ၏ ပထမဆုံးဆရာသည် မိခင်နှင့် ဖခင်တို့ ဖြစ်လေသည်။‘ချိုမိုင်မိုင်’ မှ အစပြု၍ အပြောအဆို၊ အမူအရာ၊ လှုပ်ရှားမှုများကို အဖေနှင့် အမေက သင်ပေးခဲ့သည်။တမင်တကာ မသင်သော်လည်း မိဘများ၏ နေ့စဉ်လှုပ်ရှား ပြောဆိုသမျှသည် သားသမီးကို သင်ပြနေတာနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်လေသည်။သားသမီး ပြောသမျှ လုပ်သမျှကို မပြုပြင်ဘဲ ကြည့်နေခြင်း၊ ခွင့်ပြုထားခြင်း၊ လျစ်လျူရှုထားခြင်းသည်လည်း ထိုသို့ပြောဆိုပြုမူရန် သင်ပေးနေခြင်းဖြစ်၏။
အချို့မိဘများသည် ငွေကြေးပစ္စည်းဥစ္စာ ကြီးပွားရေးကို နံပါတ်တစ် ဦးစားပေးကြသည်။ရလေလိုလေဖြစ်ကာ လောဘကို အတောမသတ်နိုင်ကြပေ။လက်အောက်ငယ်သား အလုပ်သမားများကိုလည်း ကိုယ့်အပေါ် မှီခိုနေရသူတွေဟု မထောက်မညှာဘဲ အတ္တကို ရှေ့တန်းတင်ကြသည်။မောက်မောက်မာမာ ဆက်ဆံကြသည်။မညှာမတာ ခိုင်းစေကြသည်။
အချိန်ကိုလည်း ခေါင်းပုံဖြတ်၏။လုပ်အားကိုလည်း ခေါင်းပုံဖြတ်၏။လုပ်အားခကျတော့ မဖြစ်စလောက်ပေးပြီး မဟာကျေးဇူးရှင်ကြီးအဖြစ် ခံယူကာ ပီတိဖြစ်နေကြ၏။သားသမီး၊ တပည့်များကိုပင် လက်မထောင်ကာ “ငါ့လိုဖြစ်ချင် ငါ့လိုကြိုးစား” ဟု မာန်တက်လျက် သူတို့လိုတွေး၊ သူတို့လိုကျင့်၊ သူတို့လို ပြုလုပ်စေသည်။
အချို့က လက်နက်အားကိုး၊ အသိုင်းအဝိုင်းအားကိုးနှင့် သူတို့ထက် အင်အားနည်းသောသူများအပေါ် အနိုင်ကျင့်ကြ၏။လုယက်၏။သတ်ဖြတ်၏။စီးပွားပျက်စေ၏။ကိုယ်လက်အင်္ဂါ ချို့တဲ့စေ၏။မိသားစုသိုက်မြုံတွေ ပြိုကွဲပျက်စီးစေ၏။သူတို့လုပ်ရပ်များ မှန်သည်၊ မှားသည် မဆင်ခြင်ဘဲ သူတို့လုပ်ချင်သမျှ ဖြစ်နေတာကို အမှန်တရားဟု ထင်နေကြ၏။သူတို့အမှန်ဟု ထင်နေသော ထိုအမှားများကို သားသမီးများအား ဆိုးမွေပေးနေကြ၏။
အချို့သော အာဏာရှင်များကျတော့ ပိုင်ဆိုင်ထားသော ရာထူးအာဏာအပေါ် ယစ်မူးသာယာနေကြ၏။အာဏာလက်ဝယ်ရှိသဖြင့် ငွေဆိုတာလည်း အလိုလိုရနေကြ၏။ထို့ကြောင့်လည်း ထိုင်နေသည့် ပုလ္လင်ပေါ်က ဆင်းရမှာကို အဝီစိငရဲသို့ သွားရမည်ထက် ပို၍ကြောက်ကြ၏။တွေ့သမျှလူများကို လူကောင်း လူဆိုး၊ မိတ်ဆွေ ရန်သူ မခွဲခြားနိုင်တော့ဘဲ ပုလ္လင်ကို လုယူမည့်သူများ၊ ပုလ္လင်ပေါ်မှ ဆွဲချမည့်သူများဟု တစ်ထစ်ချယူဆကာ ရိပ်ခနဲမြင်တာနှင့် ဖမ်းဆီးပြီးသား၊ ချုပ်နှောင်ပြီးသား၊ အပြစ်ပေးပြီးသား ဖြစ်နေ၏။သားသမီးများကို ပွဲထုတ်၍ သူတို့နှင့်အတူ အရိုအသေခံစေလျက် စင်မြင့်မှာတင်ကြ၏။သူတို့၏ အမွေဆိုးများကို သားသမီးတို့အား တိုက်ရိုက်ပေးနေကြ၏။
ထို ငွေကြေးမာန်၊ လက်နက်မာန်၊ အာဏာမာန် တက်သူများအနေနှင့် သားသမီးတပည့်များက မိမိတို့၏ အပြောအဆို၊ အမူအရာ၊ အတွေးအခေါ် အကျင့်ဆိုး၊ စရိုက်ဆိုးများကို တွေ့ရှိပြီး မိမိတို့၏ ခြေရာအတိုင်း ဆက်လျှောက်၍ မိမိတို့လို လူဆိုးတွေဖြစ်လာမည်လား။မိမိတို့၏ အမှားများကိုမြင်၍ အရှက်ရကာ မျက်နှာငယ်နေကြမည်လား၊ မိမိတို့ကို အထင်သေးသွားကြမည်လား၊ စိတ်မထိန်းနိုင်ဘဲ မိမိတို့၏ နားရွက်ကို ကိုက်ဖြတ်ချင်နေမည်လားဟု မစဉ်းစားမိကြပေ။
အများအကျိုးအတွက် အသက်စွန့်ခဲ့သော မိကောင်းဖကောင်းများ၏ သားသမီးများသည် မိဘ၏ ‘အေးရိပ်’ ကြောင့် လောကအလယ်မှာ ထည်ထည်ဝါဝါနှင့် ခေါင်းမော့၍နေရပုံ၊ အများကိုဒုက္ခပေးသော မိဆိုးဖဆိုးများ၏ သားသမီးများသည် မိဘ၏ ‘အပူရိပ်’ ကြောင့် လောကအလယ်မှာ ညှိုးညှိုးငယ်ငယ်နှင့် ခေါင်းငုံ့၍နေရပုံတို့ကို ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အထင်အရှား မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။
ဤသည်ကို သတိမထား၊ မသိဆိုးဝါးကာ မိမိတို့၏ အတ္တအတွက် သက်သက်ယစ်မူး သာယာနေကြဦးမည်ဆိုလျှင်တော့ Please cover your ears. ကျေးဇူးပြု၍ နားရွက်လေးတွေ ဖုံးထားကြပါဟု။
နိုဝင်ဘာ - ၂